Izindaba - Ziyini izinzuzo zokusebenzisa indebe yokushaya indlwabu?
Ziyini izinzuzo zokusebenzisa indebe yokushaya indlwabu?
I-Aircraft Cup ingumkhiqizo wezocansi odumile wabesilisa futhi ingahlangabezana nezidingo zabo zokushaya indlwabu. Kepha abantu abaningi ngokwengeziwe bafuna ukwazi ukuthi ngabe kuyayilimaza yini impilo yabantu?
Izinto ezisetshenziselwa ukwenza izinkomishi zokushaya indlwabu zenzelwe ikakhulukazi abicah bezokwelapha ezithambile ezingeyona enobuthi, ngobumnene obumaphakathi kanye nokwakheka kwangaphakathi okulingene. Yenzelwe ngokuya ngesakhiwo sangaphakathi somuntu wangempela, esingaba yindawo ephelele yabesifazane. Futhi ukwakheka kwangaphakathi kwenkomishi yokushaya indlwabu kuqinile, kufana nendawo yangasese yabesifazane. Uma uyisebenzisa, isondele kakhulu emuzwa nomuntu wangempela, othuthukise kakhulu ikhwalithi yokushaya indlwabu. Ngakho-ke inqobo nje uma usebenzisa indlela yemiyalo yokufundisa, futhi uyisebenzise ukunaka izinyathelo zokuqapha, ngeke kube yingozi emzimbeni womuntu. Manje ngokulandela, ungabona izinzuzo zayo lapho usebenzisa indebe yokushaya indlwabu.
1, ukusetshenziswa kahle kwezindebe zokushaya indlwabu ngeke kukwenze uthelele izifo, futhi asikho isidingo sokukhathazeka ukwenza amantombazane akhulelwe kanye nezinye izinkinga. Ithoyizi lakho langasese eligcina uhlala futhi ulimaze ngentando yakho.
2, Akunasidingo sokukhathazeka ngemizwa yakho yesinye isigamu, noma ukusebenza kwakho, indebe yokushaya indlwabu ikunikeza ngokuphelele isikhala sakho esimnandi.
3, noma ngabe uwedwa, noma enye ingxenye yakho ayikulungele ukubambisana, indebe yokushaya indlwabu ingahlala ihlangabezana nezidingo zakho. Kulula ukuphatha futhi uzifihle. Lapho usohambweni, kungabuye kwenziwe ukuze ngezikhathi ezithile.
4, isifiso sobulili kuyinto ejwayelekile yomuntu, kepha kuvame ukudala izinkinga eziningi, njengokukhohlisa, ukukhaphela, izindleko zemali, ukuthola izifo nezinxushunxushu emphakathini. Izinkomishi zezindiza zingakhulula inkanuko ngokuphepha, zigweme amaphutha enziwe lapho kucatshangwa emzimbeni ongezansi, ukuze ucabange ngokuthula endaweni yokusebenza.
5, izinkomishi zezindiza zingasetshenziswa kanye nenye ingxenye yakho ukukhulisa ubumnandi bezocansi, isipiliyoni sabangane besifazane abaningi sikhombisa ukuthi izinkomishi zendiza zingabasiza baqonde indlela umyeni wabo asabela ngayo ngokomzimba nangokwengqondo, benze ubulili buhambisane, kepha futhi ngesikhathi somzimba nokukhulelwa isikhathi sokuhlangabezana nezidingo zabo zamanye amahafu, abangane abaningi besifazane bazothenga nenkomishi yendiza ethokomele kumyeni wakhe.